Ardell Aqua Lashes ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း- ဤမျက်တောင်အတုများသည် အမှန်တကယ်ထိရောက်မှုရှိပါသလား။
Yahoo Lifestyle Canada သည် သင့်အား အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများဖြင့် အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များကို ရှာဖွေရန် ကတိပြုပါသည်။ ဤစာမျက်နှာရှိ လင့်ခ်များမှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူမှုများမှ မျှဝေမှုများ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဈေးနှုန်းများနှင့် ရရှိနိုင်မှု အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က အနုပညာနဲ့ လက်မှုပညာ ကစားတုန်းက အဲလ်မာရဲ့ ကော်ပတ်က နေရာတိုင်းကို မှတ်မိလား။ ဆယ်စုနှစ်...
ဤဟယ်လိုဝင်း၊ အလွယ်ဆုံးဝတ်စုံသည် ဝတ်စုံဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ 2019 ခုနှစ်တုန်းက တစ်သက်လုံး လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ Jumpsuit ဟာ "Holy Grail of Halloween" လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်က၊ Booksmart၊ Fleabag၊ Us—၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အစွဲအလမ်းကြီးသော ပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုအခိုက်အတန့်များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အားလုံးသည် အနည်းဆုံး ပြီးပြည့်စုံသော jumpsuit တစ်မျိုးကို ပြသထားသည်။ ဒါ​ပေမယ့်​ အရာ​တွေက Chan...
Dublin၊ သြဂုတ် 11 ရက်၊ 2021 (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသတင်းအေဂျင်စီ)-ResearchAndMarkets.com မှ "False Eyelashes Market Forecast to 2028-COVID-19 Impact and Global Analysis (အမျိုးအစား၊ Material and Distribution Channel)" ကို ResearchAndMarkets ၏ ထုတ်ကုန်များသို့ အစီရင်ခံစာ ထည့်သွင်းထားပါသည်။ com ။ 2021 ခုနှစ်တွင် မျက်တောင်တုများ...
Eyeliner ဖြင့် နောက်ဆုံးမိနစ် Halloween ဝတ်စုံ ၃ ခု
Eyeliner ဖြင့် ဖန်တီးထားသော နောက်ဆုံးမိနစ် Halloween ဝတ်စုံ ၃ စုံကို သင့်မိတ်ကပ်အိတ်ကို အသုံးပြု၍ မှော်ဆန်မှုအချို့ကို ပြုလုပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်၏ Halloween အစီအစဉ်များသည် နောက်ဆုံးမိနစ်အထိ ပျက်သွားပါက၊ ဖန်တီးရန် လွယ်ကူသော ၀တ်စုံတစ်ခုအကြောင်း စတင်စဉ်းစားရန် အချိန်ကျရောက်နေပြီဖြစ်သည်။ သေချာတာပေါ့၊ မင်း နားတစ်စုံကို ဖောက်ပြီး အဲဒါကို လို့ ခေါ်နိုင်တယ်...
အကြိမ် ၄၀ မြောက် Qingdao နိုင်ငံတကာ အလှအပဆိုင်ရာ ကုန်စည်ပြပွဲ
2021 ခုနှစ် 2021 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 11 ရက်နေ့မှ 13 ရက်နေ့အထိ Qingdao International Convention and Exhibition Center တွင် ကျင်းပသည့် နှစ် 40th China (Qingdao) International Beauty Salon အလှကုန်ပြပွဲ (Beauty Expo) တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အလှအပ၊ အလှကုန်၊ အလှကုန်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တက်တူးနှင့် လက်သည်း မျက်တောင်အလှ နယ်ပယ်ငါးခုကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ ဧရိယာအကျယ်အဝန်းဖြင့်...
ဤ $9 mascara သည် Amazon ကြယ်ငါးပွင့်သုံးသပ်ချက်ပေါင်း 52,000 ကျော်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့ကို နှစ်သက်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကိုလည်း သင်နှစ်သက်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ E ဖြင့် ဈေးဝယ်ပါ။ ဆက်နွယ်မှုတစ်ခုရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လင့်ခ်မှတဆင့်တစ်ခုခုကို ၀ ယ်ပါကကော်မရှင်တစ်ခုရနိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းကို E ဖြင့်မဟုတ်ဘဲ လက်လီရောင်းချသူမှ ရောင်းချသည်။ မျက်တောင် ပင့်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် မျက်တောင် ချဲ့ခြင်း သည် အချိန်ကြာသည် ...
ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံး ဆောင်းရာသီအရောင်အတွက် BV Green ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံး ကြွေကျတဲ့အရောင်အတွက် BV အစိမ်းရောင် 1 ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖက်ရှင်ဆိုတာ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လူကြိုက်များသောအရောင်များကို နှစ်အလိုက်ခွဲရန် မလုံလောက်တော့ပါ။ 2. Bottega Veneta သည် ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာ Daniel Lee ၏ ဒီဇိုင်းဖြင့် လူကြိုက်များသောစာရင်းသို့ ပြန်ရောက်ကတည်းက ဒီဇိုင်းအစိတ်အပိုင်းတိုင်းသည် ...
Lash Extension တွေက ဘယ်လောက်ကြာကြာခံမလဲ။
Lash Extension တွေက ဘယ်လောက်ကြာကြာခံမလဲ။ မျက်တောင်အဆက်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့်4ပတ်မှ6ပတ်ကြားဖြစ်သည့် သင့်သဘာဝမျက်တောင်စက်ဝန်းနှင့် တူညီသောသက်တမ်းရှိသည်။ ဒါပေမယ့် ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ဖောင်းနေတာမျိုး မဖြစ်ရအောင်၊ မျက်တောင်အလှပြင်ဆိုင်အများစုဟာ မျက်တောင်တွေကို လုံးဝကြည့်မရအောင် ၂ပတ် ဒါမှမဟုတ် ၃ပတ်အကြာမှ ငွေဖြည့်ပေးဖို့ အကြံပြုလေ့ရှိပါတယ်။
အမျိုးသား ပွဲတော်အားလပ်ရက်များအတွက် အသိပေးချက်
အသိပေးချက် ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်တိုဘာလ 1 ရက်မှ7ရက်၊ 2021 ခုနှစ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ အမျိုးသားအထိမ်းအမှတ် ပွဲတော်အားလပ်ရက်များတွင် ရှိနေမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ ဤကာလအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ရုံးမတက်ဘဲ အီးမေးလ်ဖတ်ရန် ခွင့်မပြုပါ။ ဒါပေမယ့် မျက်တောင်တုအတွက် အရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်ဆိုရင် ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်း +86 135 ကို ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ...
သင့်မျက်လုံးပုံသဏ္ဍာန်အတွက် မှန်ကန်သော မျက်တောင်တုများကို မည်သို့ရှာဖွေနည်း (၂)
သင့်မျက်လုံးပုံသဏ္ဍာန်အတွက် မှန်ကန်သော မျက်တောင်တုများကို မည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း သင့်မျက်လုံးပုံစံကို နားလည်ခြင်းက သင့်မျက်နှာနှင့်လိုက်ဖက်အောင် အကောင်းဆုံးမိတ်ကပ်ကို ဖန်တီးနိုင်စေမည်ဖြစ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးပုံသဏ္ဍာန်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ဆုံးဖြတ်မည်နည်း။ မျက်လုံးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ရန်နှင့် ၎င်း၏ပရိုဖိုင်ကို အကဲဖြတ်ရန် မှန်တစ်ချပ်ရယူပါ။ 1. မျက်ဝန်းတစ်ခုလုံးကို မြင်နိုင်သလား (အရောင်...
မျက်တောင်တု လိမ်းနည်း (၁)
False Eyelashes လိမ်းနည်း 'မျက်တောင်တုကို အသုံးချခြင်း၏ အနုပညာကို ကျွမ်းကျင်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းသည် အလေ့အကျင့်နှင့် စိတ်ရှည်မှုများစွာ လိုအပ်သော်လည်း ရလဒ်များသည် ချက်ချင်းလက်မလွတ်နိုင်ပါ။' bareMinerals Make-up Artist Ambassador, Cher Webb က ပြောသည်။ 'မျက်တောင်မလိမ်းခင် ငါအမြဲတမ်း...
Christian Dior - အိပ်မက်ဒီဇိုင်နာ ပြပွဲကို ဘရွတ်ကလင်းပြတိုက်တွင် ဖွင့်လှစ်သည်။
ပဲရစ်မြို့ရှိ အလှဆင်အနုပညာပြတိုက်တွင် ၎င်း၏အောင်မြင်မှုပြီးနောက်၊ “Christian Dior: Designer of Dreams” ကို 2021 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ 10 ရက်နေ့တွင် နယူးယောက်ရှိ Brooklyn ပြတိုက်တွင် ပြသသွားပါမည်။ ပြတိုက်မှူး MATTHEW YOKOBOSKY နှင့် ပူးပေါင်းကာ Curator Florence Muller သည် ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အရာဝတ္ထု...